Umaka: kuqale i-imeyili | Martech Zone
Maka: i-imeyili ebangelwe
ULwesithathu, May 24, 2017 ULwesithathu, May 24, 2017 Douglas Karr
Ngokusebenza nabathengisi be-imeyili abaningana, bengilokhu ngimangazwe ukungabi bikho kwemikhankaso ye-imeyili edizayinwe ngaphambili, esebenzayo ngaphakathi kwama-akhawunti lapho isetshenziswa. Uma uyipulatifomu efunda lokhu - kufanele ube nale mikhankaso isilungele ukuya kusistimu yakho. Uma ungumthengisi we-imeyili, kufanele ngabe usebenza ukufaka izinhlobo eziningi zama-imeyili okwazi ukukhulisa amathuba okubandakanya, wokuthola, wokugcina nawokuthengisa. Abamakethi abangasebenzisi i-imeyili ebangelwe
ISonto, Ephreli 3, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ukuzenzekelayo kokumaketha kuyigama eliyinkimbinkimbi elibonakala lisetshenziswa kukho konke kulezi zinsuku. Uma ipulatifomu yesoftware ingadala umlayezo kumamukeli nge-API yawo, ikhuthazwa njengokuzenzakalela kokumaketha. Ngokubona kwami, lokhu kungukungathembeki nje. Yize lokhu kungaba umsebenzi ozenzakalelayo ohambelana necebo labo lokumaketha, akusona neze isisombululo sokumaketha. Eqinisweni, ngikholwa ukuthi iningi lezixazululo zokuzenzekelayo zokumaketha ezitholakalayo - ngisho ezinkulu kunazo zonke - zinazo
NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2015 Douglas Karr
Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi sinohlelo lokudonsa ekumaketheni okungenayo ongabhalisa kusayithi lethu (funa isilayidi esiluhlaza ngendlela). Imiphumela yalowo mkhankaso wokumaketha we-imeyili ezenzakalelayo iyamangalisa - ababhalisile abangaphezu kuka-3,000 babhalise nababhalise kakhulu, bambalwa kakhulu. Futhi asikaze siguqule ama-imeyili abe yi-imeyili enhle ye-HTML okwamanje (kuhlu lwezinto okufanele zenziwe). I-imeyili ezenzakalelayo nakanjani